दलित बौद्धिकतामाथि विमर्श | Diyopost
हिन्दु समाजमा प्रत्येक वर्ष भाद्र पदमाहको शुक्लपक्षको चतुर्थीमा विश्वकर्मा पुजा गरिन्छ । विश्वकर्माको सम्बन्ध वास्तुसँग भएको कारण फलाम, काठ, सुन चाँदीसँग सम्बन्धित सबै साधनहरुको पुजा गरेर विश्वकर्मा पुजा मनाउने गरिन्छ । विश्व पुराणको पहिलो अंशमा भगवान विश्वकर्मालाई वास्तु कलाको जनश्रीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । अझै अगाडी भनिएको छ,–‘विश्वकर्मालाई दैवि युगका इन्जिनियर भनेर प्रष्ट्याएको छ ।
दैवियुगका इन्जिनियर विश्वकर्माले जलयोगको निर्माण गरेको पनि किंवदन्ती छ । यतिमात्र होइन हिन्दु धर्म शास्त्रमा द्वारिका, हस्तिनापुर, ईन्द्रप्रस्थ, सुधामापुरी, रावणको श्वर्ण नगरि लंका र स्वर्ग पनि विश्वकर्माले नै निर्माण गरेको उल्लेख छ ।
राजाहरु धर्मको आदेशभन्दा एक इन्च पनि दायाँ बाँया चल्न पाउँदैन थिए । मानिसले समाजका अगाडी ईश्वरीय शक्ति र धर्मलाई मात्र देख्दा समाजका विभिन्न काल खण्डमा संघर्षहरु भए । संघर्षमा हार्नेहरु उत्पीडनमा पर्दै गए । राज्यले उत्पीडन र विभेदलाई सस्कृतिसँग र सस्कारसँग जोड्दै गयो । कालन्तरसम्म राज्यका विधिहरु पनि असमान रुपमा विकास हुँदै गए ।
राजा रामले धर्मादेशको पालना गर्ने नाममा शुद्र जातीका गुरु समुखको बध गरेको हिन्दु धर्म शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । हिन्दु धर्मले शास्त्रको अध्यायन, वेदको जप र तप गर्नु ब्राहमणको एकल पेशाको रुपमा विकास गर्‍यो ।
संघर्षका विभिन्न कालखण्डमा राज्य र समाजको विभेद र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई शास्त्रको अध्यायनबाट बन्चित गरियो । सत्य युगकालिन राजा रामको राज्यमा शुद्र जातीका समुखमहर्षी ऋषिले धर्मशास्त्रको अध्ययन र तप गरेकै कारण हत्याभएको किंवदन्तीले सत्य युगमा पनि समाजमा विभेद विद्यमान थियो भन्न सकिने आधारहरु छन । यस पश्चात इतिहासले निर्माण गरेको नजिरलाई उल्लंघन गर्ने हिम्मत कुनै उत्पीडित वर्ग जातिले गर्न सकेन । उत्पीडित वर्गहरु शासनको मुल प्रवाहमा आउन नसक्दा सामाजिक उत्पीडनका पर्खालहरु भत्काउन सकिएन । बरु धर्म र वर्गका आडमा समाजमा विभिन्न नामका सामाजिक उत्पीडनका श्रृंखलाहरु बढ्दै गए ।
द्वापर युगमा पाण्डु पुत्र अर्जुन आफु एक महान धर्नुरधन बन्न चाहान्थे, अर्जुनको धम्कीलाई सहन नसकेर महर्षि द्रोणाचार्यले एकलभ्यको औलागुरु दक्षिणाको रुपमा मागे । यस पश्चात शुद्र जातिले कहिल्यै एक लव्य बन्ने साहस गर्न सकेन । उत्पीडितहरु दैविक कालबाटै शिक्षा र बौद्धिकता बाट बन्चित भएको भएको प्रष्टिन्छ ।
बौद्धिकता समाजको सच्चा आवाज हो । आधुनिक समाज होस वा परम्परागत समाज, धनी समाज होस वा गरिव समाज, उपल्लो जाती होस वा तल्लो जातीको । समाजले कुनै न कुनै समुहलाई बौद्धिक समाजको रुपमा स्विकार गरेको हुन्छ । राज्यले पनि निश्चित समुदायलाई राज्यको क्रिम नागरिकको उपमाको रुपमा विकास गरेको हुन्छ ।
भलै नेपालको बौद्धिकतामा दासबौद्धिकता हावि भएको छ । राज्यलाई जब गाह्रो अप्ठयारो पर्दछ, बौद्धिक समुदाय वा समुहको आवश्यकता पर्छ । बौद्धिक जगतको रचनात्मक आलोचना र सृजनात्मक सल्लाहकै आधारमा राज्य वा सरकारका गतिविधिहरुलाई जनमुखी बनाउने हो । यति मात्र होईन राज्यलाई कहिले काहि आलोचनात्मक सल्लाहको पनि अतावश्यकता महशुस हुदाँ बौद्धिक समुदायको रचनात्मक विचारको प्रतिक्षा राज्यले गर्छ । वैदिककाल देखि नै राज्य सल्लाहकारको रुपमा निश्चित व्यक्तिलाई राख्ने परम्परा चलिआएको छ । प्राचिनता देखि आधुनिकता र पश्चिमा देखि पुर्वीय दर्शनमा विकास भएको बौद्धिकता पछिल्लो समय राज्य र समाजको सम्पत्तीको रुपमा विकास भएको छ ।
तर, हिन्दु धार्मिक समाजद्धारा विद्यालाई धर्म ग्रन्थको ज्ञान आर्जनको क्षेत्र भित्र सिमित पारियो । वेद, पुराणको अध्ययन नै हिन्दु राज्यको शिक्षा बन्यो । जसले शास्त्रको अध्ययन गर्ने अवसर पाए । त्यो समाज वा जाती शिक्षित, बौद्धिक जाती र समाजको रुपमा विकास हुदै गए । हिन्दु राज्य र समाजमा बौद्धिकताले स्वतस्फुर्त रुपमा विकास हुने अवसर पाएन । सदियौ देखि उत्पीडनमा परेको समुदायले बौेद्धिकताको महत्वका सवालमा बुझ्नै सकेको पनि देखिदैन ।
के दलित पनि बौद्धिक हुन्छन? हाम्रो समाजले, राजनितिले, चेतनाले अझै दलितहरुका सवालहरुलाई गम्भिर रुपमा किन ग्रहण गर्दैन? दलितहरु तार्किक रुपमा कमजोर, शैक्षिक रुपमा पछाडी भएकै कारणले भएका होईन्न?
जुन समाज र वंशले शास्त्र अध्ययनमा अनुमती पाए तिनीहरु समाजमा उच्च जाती र उच्चवर्ग तथा बौद्धिक वर्गको रुपमा विकास हुदै गए, जुन समाज र वंशलाई शास्त्रअध्यायन बाट बन्चित गरियो ती समाज र वंशको बौद्धिकता विकास बाट बन्चित भए । ईतिहासका कयौँकाल खण्डहरुमा, धर्मग्रन्थका कयौँ पृष्ठहरुमा, महाभारत, रामायणका कैँयौ घटित पर्वहरुमा यस्ता कृत्यहरु मञ्चन भएको देखिन्छ ।
हिन्दु समाज भित्रको मुख्यतः दलित समुदाय यहि मियोमा सदियाँैदेखि मिचिएको समुदायको रुपमा विकास भयो । समाजको यहि सिस्टमका कारण इतिहासका काल खण्डमा दलित समुदायले क्रुर उत्पीडन सहनु प¥यो ।
अहिलेको नेपाली राजनीति, सामाजिक सवाल र समाजले कुनै विषयका सवालमा कार्यक्रम वा समारोह हुँदा दलित प्रतिनिधिहरुको बोलि, विचार र योजनाले खासै महत्व पाउँदैन । दलित समुदायले भोगेको उत्पीडनका कुरा कुनै बौद्धिकताको पगरी गुथेका मनुले बोल्दा राज्यका संरचना र संचार मध्यमले प्राथमिकता दिन्छ । तर, जसले हजारौ वर्ष देखिको उत्पिडन सहेर समाजमा संघर्षशिल जीवन विताई रहेको उत्पिडित योद्धाले बोल्दा महत्व पाउदैन ।
उत्पििडनका सवालमा, छुवाछुतका सवालमा, अधिकारका सवालमा एउटा दलित लेखकले लेख्दा संञ्चार माध्यमहरुले महत्व र चासो राख्दैनन्, स्थान पाउदैन । हिन्दु सभ्यता भित्र विकास भएका राज्य र राज्यले निर्माण गरेका प्रत्येक संरचनाले हामी बाँचेको सताब्दिको यो दशक सम्म पनि दलित मुद्धालाई समस्याका रुपमा स्विकार गर्न सकेन । दलित समुदायका व्यक्तिलाई बौद्धिक व्यक्तिको रुपमा स्विकार्न नसकेको तितो यर्थाथता यहि हो ।
हिन्दु समाज भित्रको दलित समुदाय उत्पीडित वर्गको आधारभुत वर्ग हो । अहिलेको समयको राजनैतिक र सामाजिक आन्दोलनको प्रमुख समाजमा विद्यमान छुवाछुतको मुद्धा हा । दलित समुदायले भोगेको सामाजिक व्यवहारको मुद्धा हा । आर्थिक र राजनीतिक असमानताको मुद्धा हो । तर, आधुनिक समाजसँगै यस्ता सामाजिक दुरासय र व्यवहारहरु कमजोर हुदै जानु पर्नेमा शिक्षित समाज भित्र दलित समुदायले प्राप्त गरेको शिक्षा र प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार टाउको दुखाईको विषय किन बन्दै छ ।
त्रेता युगको विशाल धर्मयुद्ध, द्वापर युगको भिषण भरत वंशिय शक्ति संघर्षले तत्कालिन समाजको संरचनामा के प्रभाव पार्यो र वर्ग तथा जातिहरुको विकास कसरी भयो, उत्पिडित समुदायका सवालमा अधयन गर्ने सिंगो तप्का र दलित अध्याताले अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषय बनेको छ ।
इतिहासका प्रत्येक सामाजिक संघर्षमा सहभागी बनेको दलित समुदायको क्षमता र बौद्धिकता माथी अहिलेको राज्य, राज्यनिर्मित संरचना र राज्यको व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउदै दलित समुदायको बौद्धिक क्षमताको मुल्यांकन गर्नैपर्छ । राज्यका संरचनागत व्यावहारले दलित समुदाय कभित्रको बौद्धिकतालाई हेयको दृष्टिले होइन सम्मानको दृष्टिको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।
देशको घाउ देख्न सक्ने ज्ञान बोकेको पुस्तक ‘अस्मिता’
स्टाफ नर्सको बकपत्र : हामीलाई बहिष्कार नगर्नुहोस् !
दलितले प्रेम गर्दा हत्याको उपहार श्रङ्खला !
‘छाती, हात र निधारमा गोली हानेपछि मर्यो भन्दै मकैबारीमा मलाई सेनाले यसरी फालेको थियो’